Tababaraha reer Spain ee Arsenal oo laga helay Fayruska Corona – Geelle Magazine
Tababaraha reer Spain ee Arsenal oo laga helay Fayruska Corona
caliahmed Posted On March 13, 2020
Tababaraha kooxda Kubadda Cagta ee Arsenal Mikel Arteta ayaa maray tijaabo caafimaad kasoo la sheegay in laga helay cudurka loo yaqaan coronavirus ama Covid 19 isla markaana ciyaartii ay kooxdiisu Maalinta Sabtida ah ay la ciyaari laheed Kooxda Brightonna dib loo dhigay.
Kooxda Gunners ayaa xidhay garoonkeeda tababarka iyadoo shaqaalihii kooxda ee xidhiidhka dhaw la lahaa Tababare Arteta ay hadda iskood u go’doomin doonaan.
Madaxda Horyaalka Premier League-ga ayaa qaban doona Maanta oo Jimco ah “kulan deg deg ah” si looga wada hadlo waxyaabaha dhici doona mustaqbalka.
“Tani runtii waa niyad jab,” ayuu yiri Tababaraha reer Spain ee Arteta, oo 37 jir ah.
“Tijaabo ayaan maray kadib markii aan dareemay xaalad liidata. Waxaan kusii sugnaan doonna shaqadeeda hadii layga ogolaanayo.” Ayuu intaasi kusii daray Tababare Arteta.
Waxaa la filayaa in Madaxda Arsenal ay go’doomin ku sameyn doonaan “dad aad u tiro badan” , kuwaasi oo ka mid “Safka koowaad ee kooxda”.
Kooxda ayaa ku qasabtay in ay wajahdo Brighton Kulankooda Premier League-ga garoonka Amex sabtida (15:00 GMT) laakiin Kooxda Brighton ayaa soo saartay bayaan, waxyar kadib markii la xaqiijiyay tijaabada caafimaadka ee uu maray Tababare Arteta, iyagoo kadibna ku dhawaaqay in ciyaarta la hakiyay.
BBC Sport ayaa fahamsan in dhammaan 20-ka kooxood ee Premier League-ga ay doonayaan in ay go’aansadaan istiraatiijiyad mideysan, isla markaana mid ka mid ah xulashooyinka suurtagalka ah ee looga wada hadli doono kulanka ayaa dib u dhigaya inta ka hartay kulamada isbuucaan la qorsheeyay.
Maamulaha kooxda Arsenal Vinai Venkatesham ayaa yidhi: “Caafimaadka dadkeena iyo guud ahaanba shacabka ayaa ah ahmiyadeena koowaad ah, waana meesha aan diirada saarayno.”
“Waxaan wadahadal firfircoon la leenahay dhammaan dadka ay quseyso si aan ugu maareyno xaaladdan si munaasib ah, waxaana rajeyneynaa inaan kusoo laabano tababarka oo aan ciyaarno sida ugu dhakhsiyaha badan” Maamulaha kooxda Arsenal ayaa intaasi hadalkiisa ku daray.
Ciyaartii Kooxda Arsenal ee Premier League-ga ee ay la ciyaari lahaayeen Kooxda Manchester City arbacadii ayaa dib loo dhigay, iyadoo la sameynayo taxaddar, iyadoo dhowr ciyaartoy oo Gunners ka tirsan ay go’doomin galeen kadib markii milkiilaha kooxda Olympiakos ee lagu magacaabo Evangelos Marinakis uu ku dhacay Fayruska Coronavirus. Arsenal ayaa sheegtay in Milkiile Marinakis oo 52 jir ah uu la kulmay tiro ciyaartoy ah oo ka tirsan Arsenal kadib markii Gunners ay martigelisay kooxda reer Giriig ciyaar ka tirsaneyd Koobka Europa League-ga oo ka dhacay Garoonkeeda labo isbuuc kahor. Naadigu wuxuu yidhi ma jiro ciyaartoy ama shaqaale loo baari doono cudurka Coronavirus.
Daafaca caanka ah ee u ciyaara Kooxda Kubadda Cagta ee Manchester City Benjamin Mendy ayaa is casilaya kadib markii xubin ka mid ah qoyskiisa la seexiyay isbitaal lagana helaya astaamo muujinaya cudurka Coronavirus.
Ugu dambeyn seddex ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda Leicester City ayaa sidoo kale si iskood isaga baxay kadib markii ay kasoo muuqdeen astaamo muujinaya cudurka ‘Coronavirus’ ama ‘Covid19’.
Tifatiraha Isboortiga ee BBC-da Dan Roan ayaa sheegay in Horyaalka Premier League-ga uu haatan qarka u saaran yahay in Albaabada lisugu dhufto.
Dareewal qiraya dhibatada Bas lagu weeraray Kenya